Scup: सामाजिक मीडिया निगरानी, ​​विश्लेषण र सगाई | Martech Zone
शनिबार, अगस्ट 17, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
स्कप घोषित स्कूप - ब्राजिलमा शुरू भयो र अब अंग्रेजी, पोर्तुगाली र स्पेनिश समर्थन गर्दछ। व्यवसाय र एजेन्सीहरूको लागि, Scup एक वास्तविक समय सामाजिक मीडिया निगरानी, ​​प्रकाशन र विश्लेषण प्लेटफर्म को सबै मुख्य सुविधाहरु छ।
Scup एक अग्रणी सामाजिक मीडिया निगरानी उपकरण हो र 22 भन्दा बढी पेशेवरहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ। Scup ले सोशल मीडिया प्रबन्धकहरूलाई तिनीहरूको कामको माध्यमबाट विश्लेषण सम्म पोष्ट गर्न मद्दत गर्दछ, नाटकीय रूपमा उनीहरूको दक्षता वृद्धि गर्दछ।
Scup का सुविधाहरू र लाभहरू
सामाजिक मिडिया निरीक्षण गर्नुहोस् - Scup ले दिनको २ hours घण्टा, हप्ताको days दिन काम गर्दछ, सामाजिक मिडियालाई स्वचालित रूपमा निगरानी गर्दछ ताकि तपाईंसँग गर्नु पर्दैन। किवर्डहरू दर्ता गर्नुहोस् र फेला पार्नुहोस् तपाईंको ब्राण्ड र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू बारे के भनिन्छ ट्विटर, फेसबुक, युट्यूब, लिंक्डइन, Vimeo, फ्लिकर, अर्कुट, इन्स्टाग्राम, टम्बलर, स्लाइडशेयर, फोरस्क्वायर, गुगल, गुगल +, याहू! ब्लगहरू, समाचारहरू, आरएसएस फिडहरू, वेबसाइटहरू र अन्य धेरै सोशल मिडिया। स items्कलन गरिएका वस्तुहरूलाई क्रमबद्ध गर्नुहोस् सकारात्मक, नकारात्मक र तटस्थ तपाईंको मूल्यांकन अनुसार। तपाईंको वस्तुहरूको वर्गीकरण गर्न ट्यागहरू थप्नुहोस्।
पहिचान - जान्नुहोस् कि कसले तपाईंको ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्दैछ। यो सम्भव छ कि प्रभावशाली व्यक्तिहरू र व्यक्तिहरू जसले तपाईंको ब्राण्डको बारेमा सब भन्दा बढी कुरा गरिरहेका छन्, तपाईंले आफ्ना खोजहरू सिर्जना गरेको केहि मिनेट पछि। प्लेटफर्ममा नेटवर्क कुराकानीहरू तत्काल उत्पन्न गर्नुहोस्। स्कूपले कुराकानी र अन्तर्क्रियाहरू लग गर्दछ, त्यसैले तपाईं केवल मुद्दाहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ र को को हो भनेर ट्र्याक राख्न चिन्ता लिनु पर्दैन।
प्रकाशित - Scup प्रयोग गरी तपाईको सामाजिक नेटवर्कमा पोष्ट गर्नुहोस्। तपाईंको ट्विटर, फेसबुक र यूट्यूब प्रोफाइल र पोस्ट ट्वीटहरू, भित्ता पोस्ट र भिडियोहरू सबै स्कप छोड्नु बिना दर्ता गर्नुहोस्। Scup प्रशासन को लागी अनुमति-आधारित स्तर को एक नम्बर समावेश गर्दछ। केन्द्रीकरणले मात्र निगरानी व्यवस्थापकलाई प्रोफाइलहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिँदछ, तर अन्य कर्मचारीहरूलाई पोष्ट र प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। यसको मतलब, प्रश्न "सामाजिक खाता पासवर्ड" हो? केवल एक धमिलो स्मृति बन्नेछ।
रिपोर्ट - रिपोर्ट उत्पन्न गर्नुहोस् र परिणामहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। घण्टा, दिन, हप्ता, महिना वा वर्षद्वारा फिल्टर गरिएको ग्राफिक रिपोर्टहरू मार्फत तपाईंको अनुगमनको प्रगति ट्र्याक गर्नुहोस्। सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको रणनीति मूल्या to्कन गर्न आवश्यक जानकारीमा फोकस गर्नुहोस्। र यदि तपाईं आफ्ना हातहरू फोहोर पाउन चाहनुहुन्छ र कच्चा डाटाको साथ काम गर्नुहुन्छ भने, यो कुनै समस्या छैन। स्कूपले तपाइँको अनुगमनबाट सबै वस्तुहरू एक्सेलमा निर्यात गर्दछ।
Scup को लागि मूल्य निर्धारण उद्योग मा सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरु संग प्रतिस्पर्धी छ; वास्तवमा तपाईको हालको समाधानको तुलनामा तपाईले सयौं पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
टैग: वास्तविक समय अनुगमनस्कूपसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया सचेतहरूसामाजिक मिडिया विश्लेषणसामाजिक मिडिया अनुगमनसामाजिक मिडिया प्रकाशनसामाजिक मिडिया रिपोर्टिंग